WOWOW Faucet fisotroana barika tokana lava Faucet mainty
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana finday / WOWOW Fototra fisotroana barika tokana, Faucet mainty miverina miasa, Faucet miverimberina mafana
WOWOW Fototra fisotroana fisotroana barika mainty Faucet mainty, Faucet miverina mitana hafanana
Famoronana fametrahana mora.
Famoronana manerantany: 9.7 santimetatra ny haavony. Mety amin'ny ankamaroan'ny milentika. Izy io dia azo ampiasaina ho faucet bar sink, faucet fandroana ambony arc ary faucet kely ao an-dakozia. Ny vokatra iray dia mahatratra fampiasana telo.
MAFANA DUAL MAFANA & MASINA: tsipika famatsiana faucet mafana sy mangatsiaka omena, ny lever tokana dia afaka mifehy mora foana ny mari-pana sy ny volavola, ka mahatonga ny fandidiana haingana sy mahomby kokoa.
Faucet fandroana mainty Matte: endrika mainty matte tsy manam-paharoa, tsy toy ny nikela borosy na chrome mahazatra, manome anao fahatsapana mahazatra kokoa, ary ny mainty hoditra dia mora tazomina tsy misy loto.
FITAOVANA TSARA: ity fantsom-baravarankely ity dia vita amin'ny fitaovana vy maharitra maharitra miantoka ny fiainana lava sy ny kalitaon'ny tsy harafesina, tsy misy harafesina.
SKU: 2312301B-AMUS Sokajy: Faucets fandroana finday, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: 1 Tolefo, jiro fandroana, Faucets fandroana rano mafana sy mangatsiaka, Fitondrana tokana
12.01 X 8.54 X 3.19 santimetatra
Tendrombohitra havoana tokana